China CGX371SJ Glass Straight Line Beveling Machine Miaraka Lifting Function mpanamboatra sy mpamatsy | SUNKON
CGX371SJ Glass Straight Line Beveling Machine Miaraka amin'ny Fanandratra Function
■CGX371SJ Glass Straight Line Beveling Machine dia miaraka amina motera 11 izay mety amin'ny fanodinana volo sy ny sisin'ny takelaka fitaratra misy habe sy hateviny isan-karazany. Misy fitaovana fampiakarana eo amin'ny andry eo aloha mba hampifanaraka ny fanodinana habe amin'ny fitaratra isan-karazany.
■Ny fikosoham-bary madinidinika, ny fikosoham-bolo ary ny famolahana tsara dia azo vitaina indray mandeha, hiantohana ny fahamendrehana sy ny famirapiratan'ny volo hahavitana ny vokan'ny fitaratra.
■Ny fotony, ny hazo, ny fehezan-kavanana, ny tsanganana mitsangana ary ny lohan'ny fikosoham-bary dia fitaovana fanariana (nisoratana mba hisorohana ny fiovana). Manana fanoherana mahery vaika amin'ny famotehana sy ny fiovana izy ireo, ary koa ireo toetra mampihetsi-po mahatsiravina indrindra.
■Ny motera lohan'ny fikosoham-bolo dia avy amin'ny marika iraisam-pirenena: ABB, Electric dia avy any Schneider, ary manana tsipika scaffolding alloy Aluminium koa izy ary fampitana fehin-kibo Synchronous.
■Izy io no fitaovana fitotoana fitaratra tsara indrindra amin'ny fanodinana mozika fitaratra, fitaratra fanaovana asa-tanana, haingon-trano sy fitaratra fanaka, varavarana sy varavarankely, fitaratra fandroana ary fitaratra kosmetika, milina misy fampiasa betsaka io.
■PLC sy ny efijery mikasika dia azo alaina tsy azo atao, izay afaka mifehy ny hateviny, ny hateviny sisa ary ny sakany bevel.
Min.Glass size 25 × 25mm
Zoro bevel 0 ~ 45 °
Max.Hypotenuse sakany 50mm
Fibodoana tany 7500 × 1300 × 2500mm